Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. - ewa.mg
Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.
News - Santé - Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA.
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
L’article Décision N°3632/2020-MSANP fixant l’ouverture du recrutement par contractualisation de 12 Sages-femmes auprès de la Direction Régionale de la Santé publique, Alaotra Mangoro dans le cadre de la riposte contre le covid-19, financé par l’UNFPA. a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Valanaretina: 909 ireo matin’ny kitrotro
Araka ny tatitry ny minisiteran’ny Fahasalamana momba ny zava-misy momba ny kitrotro, nanomboka ny 3 septambra hatramin’ny 4 mey lasa teo, valo ny distrika mbola ahitana ny tranganaretina kitrotro. Antanambao Manampotsy, Mahanoro, Mahajanga II, Ambanja, Antsiranana I-II, Soavinandriana, ary Ambatomainty ireo distrika ahitana seho 14 isan’andro amin’ny ankapobeny. Tokony hohamafisina ny hetsika amin’ireo distrika ireo hanafoanana ny valanaretina. Tao anatin’ny efatra herinandro farany, nahatratra 3195 ny tranga ho an’ny distrika valo voalaza. Ny herinandro voalohany, 1652 ny olona voan’ny kitrotro ary nihena ho 97 ny herinandro fahefatra, araka ny fanazavana.Hatramin’ny fiandohan’ny fiparitahan’ny valanaretina kitrotro teto amintsika, 142 995 ny tranga ka 19 080 ny sokajy ahitana fahasarotana. 909 ny fahafatesana voamarina fa vokatry ny aretina kitrotro raha 340 ny fahafatesana hafa tsy voamarina ny antony. Amin’izao fotoana izao, misy fanadihadiana hamantarana ny antony nampirongatra ny valanaretina any Melaky sy ny distrikan’i Sambava. Vonjy A. L’article Valanaretina: 909 ireo matin’ny kitrotro a été récupéré chez Newsmada.
Ampitomboina izay mampiombona
Nahabe resaka tato ho ato ny amin’ny fomba fanaovana politika… manakorontana sy manapotika. Tsy lavina, anjaran’ny mpanohitra ny mitsikera izay ataon’ny fitondrana sy ny asany: fitantanana ratsy, fampanantenana tsy tanteraka, tsy fanajana ny teny nomena. Tsy inona fa mba hahazoana mandimby toerana azy any aoriana.Maharesy lahatra sy ankasitrahin’ny vahoaka hanaraka ny mpanohitra ve izay lazainy sy ataony amin’izao? Indrindra amin’izao fotoan-tsarotra iatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina fahavalo iombonana izao: mila fifanomezan-tanana, fifankaherezana. Ao anatin’izany ny fanamaivanana ny fahasahiranam-bahoaka.Any amin’ny fifidianana indray vao tsaroana amin’izany ny vahoaka hahazoana na takalona vato mba hifidy ny tena? Ekena, ny mpitondra no manana ny fahefana sy ny enti-manana hiahy sy hiaro ny vahoaka, indrindra raha ao anaty fahasahiranana. Saingy, hiandry fifidianana sy fahazoana fahefana ve vao afa-kanampy na hamonjy vahoaka?Sanatria, tsy misy afitsoka ny mpanohitra? Hany ka tsy misy vava asa fa asa vava fotsiny amin’ny fanatsatsoana, ny famendrofendroana, ny fitsikerana, ny fanakorotanana. Tsy misy izay mampiombona azy sy iombonany amin’ny mpitondra? Tsy inona fa ny tanindrazana iaraha-manana sy ivelomana, ny vahoaka antom-pisiana sy iasana.Ny fahefam-panjakana tsy iraisana no tsy mampiombona be ihany amin’izany rehetra izany? Hany ka adilahy lava no mitranga sy atao. Tsy izay mampiombona tsinona no ampitomboana sy velarina fa izay mampisaraka sy mampiady an-toerana. Tsy mahagaga raha sarotra sy mafy ary ela ny fampandrosoana amin’izay atao rehetra.Faminganana no ataon’ny sasany fa tsy fanampiana sy fanomezan-tanana. Nefa izay no hampisehoana amin’ny vahoaka fa mahay sy mahavita be lavitra no ho ny mpitondra ny tena, raha mahazo fahefam-panjakana. Amin’izany, hifidy ny tena izy amin’ny manaraka. Tsy fanararaotana anaovana izany ve izao fotoan-tsarotra izao?Rafaly Nd. L’article Ampitomboina izay mampiombona a été récupéré chez Newsmada.
« JIOI» – Filoha Rajoelina: “Horaisintsika ny andiany faha-11”
Natolotra sy nanaovana vela-kevitra teo anatrehan’ny CIJ (Comité internationale des jeux), ny asabotsy lasa teo, ny tetikasa mahakasika ny firotsahan’i Madagasikara ho kandidà amin’ny fandraisana ny « Lalaon’ny Nosy 2023 ». Araka ny nambaran’andriamatoa filoham-pirenena, Rajoelina Andry, ny firenena malagasy mihitsy no tokony hahazo io andiany faha- 11 io raha ny tokony ho izy. Rariny, hoy hatrany izy, raha mandray izany isika satria manana ny kianja lehibe indrindra aty amin’ny ranomasimbe Indianina isika. Etsy andaniny, marobe ireo fotofrafitrasa fanatanjahantena. Nohamafisin’andriamatoa minisitra, i Tinoka Roberto, ihany koa, fa nanokanan’ny fitondram-panjakana tetibola manokana mihitsy ny fanatanjahantena sy ny fananganana fotodrafitrasa ka ho mora ho an’i Madagasikara ny handray ny “Lalaon’ny Nosy 2023” satria ezahina hovitaina mialoha io fotoana io avokoa ireo tetikasa rehetra. Mitentina 150 tapitrisa dolara ny tetibola amin’izany, araka ny fanazavana hatrany.Tsahivina fa telo firenena nametraka ny antonta-taratasy amin’ny maha kandidà azy, amin’ny fandraisana ny andiany faha-11 amin’ny “Lalaon’ny Nosy”, hotanterahina ny taona 2023, ahitana an’i Maldives, i Kaomoro ary i Madagasikara. Mbola ady goavana, araka izany, ny miandry antsika na efa manana tombony mihoatra amin’ireo firenena roa ireo aza isika. Ho fantatra ny asabotsy 27 jolay izao izay handray izany ary hambara amin’ny fomba ofisialy mandritra ny lanonana famaranana ny alahady 28 jolay izao, ao amin’ny kianjan’i Anjalay, Maorisy. Mi.Raz L’article « JIOI» – Filoha Rajoelina: “Horaisintsika ny andiany faha-11” a été récupéré chez Newsmada.
Tsara jerena ny maha olona
Aorian’ny orana ny fiakaran’ny rano? Hatramin’ny fivangongoan’ny antsangana entin-driaka, ny mety ho faharavan-javatra… Tsy mifankaiza amin’izany izao fialana miandalana amin’ny fihibohana noho ny fahamehana ara-pahasalamana iadiana amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao?Hatramin’izao, misy hatrany, ohatra, ny mampiaka-peo eny ifotony fa tsy mba nahazo anjara fanampiana; eny, na anisan’izay niaritra sy naharitra tamin’ny fihibohana aza. Mbola misy ihany ny velon-taraina sy manome tsiny ny amin’ny fizarana izany: tsy mandeha araka ny tokony ho izy?Miara-dalana amin’izay ny fahaverezana asa, ny faharavan’ny fananana namidy noho ny tsy fisiana, ny fialana amin’ny fonenana tsy fidiny fa tsy nahaloa hofan-trano… Fahavoazana ifotony navelan’ny ady avokoa izany. Hanao ahoana ny hoavy? Mafimafy sy sarotsarotra no ho ny teo aloha.Misy ny karazana fanararaotana etsy sy eroa. Tratran’ny tsy fidiny ny maro ka tsy afa-manoatra sy tsy afa-manohitra? Karama mora, ohatra, fividianana entana mora, fandroahana mpiasa tsy amin’ny antony… Nefa misy koa ny mampiakatra vidin’entana, ny midongy tsy mandoa hofan-trano…Manginy fotsiny amin’izany ny karazana fisolokiana, fisandohana, fanendahana, fitantarana fahasahiranana ahazoana mangataka… Zava-tsy inona akory, mety hikasihan-tanana na hanalana aina olona. Tsy inona fa noho ny fitadiavana hoe sarotra sy mafy avokoa… Tsy misy tsy sahirana amin’izao?Mila mitandrina ny tena fa miakatra ny rano, miangona ny fako aman’antsanga. Mafy sy lalina ary ela loatra ny ady? Navesa-danja ho azy ny fahavoazana. Tsy nisy lafitsarany izay nentin’ny ady? Fandresena ny valanaretina, fitandremam-pahasalamana ho fomba fiaina, fahaizana mifampitsinjo…Mety ho mafy sy sarotsarotra ny hanarina izany rehetra izany amin’izao? Eo ny fomba fisaina, ny fomba fiaina, ny fomba fiasa… Ny maha olona ny an’ny sasany no tratran’ny karazana tsimokaretina amin’ny fanaovan-dratsy noho ny fihibohana? Na mila jerena ny maha olona, ankoatra ny sosialy.Rafaly Nd. L’article Tsara jerena ny maha olona a été récupéré chez Newsmada.
Lisi-pifidianana: mitaky ny marina momba ny “doublons” ny mpanohitra
Hanenjana hatramin’ny farany. Tonga teny amin’ny foiben’ny Ceni, Alarobia, koa, omaly, ireo eo anivon’ny “Groupe Panorama”, ahitana ireo antoko ivelan’ny fitondrana sy ny parlemantera. “Hamafisinay hatrany ny fanapahan-kevitra noraisina teny Andrainarivo fa tsy ankatoavinay ny fomba fiasan’ny Ceni. Tsy hanatrika ny fivoriana tarihin’izy ireo izahay fa hanatitra taratasy omena ireo mpiara-miombona antoka teknika sy vola (PTF) maneho izany tsy fahamarinana izany”, hoy ny loholona Rakotovazaha Olivier.Nohitsiny fa takin’izy ireo ny fahamarinan’ny fifidianana, ny tsy fahatomombanan’ny lisi-pifidianana… “Tsy mankasitraka ny Ceni mbola hitantana fifidianana izahay. Takinay ny marina momba ny lisi-pifidianana “doublons””, hoy ihany izy ireo. Nandrangaranga sahady koa ny avy amin’ny antoko Tim fa tsy handray anjara amin’ny fifidianana loholona.Synèse R. L’article Lisi-pifidianana: mitaky ny marina momba ny “doublons” ny mpanohitra a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fandoavana latsakemboky ny Fram: samy manana ny lamina ny EPP isanisany
Samy manana ny lamina noraisiny ny EPP manoloana ny toromariky ny minisitera amin’ny tsy fandoavana intsony ny latsakemboky ny ray man-dreny.Araka ny fehinkevitra tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny 16 septambra lasa teo, tsy mandoa saram-pisoratana anarana sy latsakemboky ny Fram ny ray aman-dreny ho fitsinjovana ny tokantrano sahirana taorian’ny fihibohana. Manoloana izany, samy manana ny heviny ny talen-tsekoly EPP eto an-dRenivohitra. Nanambara ny talen’ny EPP Antanandrano, Cisco Avaradrano, fa misy ny naoty manokana niainga avy any amin’ny minisitera nalefa teny amin’ny Dren sy ny Cisco ary nipaka eny amin’ny EPP isanisany nanazava fa ny saran’ny fisoratana anarana no tsy efain’ny ray aman-dreny fa manana ny fandaminana anatiny ireo EPP mbola manarama mpampianatra Fram nefa tsy misitraka karama avy amin’ny fanjakana. Tsy afa-manoatra ny talen-tsekoly satria mbola dimy ny mpampianatra Fram miampy mpiandry tanàna iray omena karama isam-bolana. Manefa 20 000 Ar, noho izany, ny ray aman-dreny rehetra ary fomba fanao isan-taona izany. Monina ao anatin’ny fokontany ihany koa ireo mpampianatra Fram ireo ka tsy malaina mandoa ny latsakemboka ny ray aman-dreny. Raha misy ny tohana manokana avy any amin’ny fanjakana momba ny karama ho an’ireo mpampianatra Fram ireo, alefa amin’ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny vola efa naloa. Mikarakara ny fandefasana ny refin-tongotry ny mpianatra momba ny kiraro sy ny aron’akanjo ny tomponandraikitra amin’izao fotoana izao. Hahazo fitaovana mialoha ny fidirana ny mpianatra avy any amin’ny fanjakana.Nalefa any amin’ny fitondrana ny filanaHo an’ny EPP any Behenjy kosa, tsy naka vola tamin’ny ray aman-dreny izy ireo fa nanaraka ny toromarika. “Nalefa eny anivon’ny tomponandraikitra ny fampianarana ny filana rehetra ka miandry izay valiny izahay”, hoy ny talen-tsekoly. Ho an’ny EPP Analakely, miandry ny vokatry ny fivoriana miaraka amin’ny fikambanan’ny ray aman-dreny izy ireo hijerena ny vahaolana satria misy mpampianatra Fram dimy mbola homena karama koa fa tsy mahazo any amin’ny fanjakana.Vonjy A. L’article Tsy fandoavana latsakemboky ny Fram: samy manana ny lamina ny EPP isanisany a été récupéré chez Newsmada.
Fanafoanana fifidianana loholona :: Nitombo telo ny fitoriana voarain’ny HCC
Niampy iray indray ireo fitoriana roa mifototra amin’ny fanoherana ny fanatanterahana ny fifidianana loholona, amin’ny 11 desambra 2020. Tafapetraka teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC), afak’omaly, ny fitoriana fanintelony nataon’ny komity fanabeazana olom-pirenena mpanara-maso ny fifidianana (KMF/CNOE), izay mitaky ny fanafoanana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy vaventy handatsa-bato amin’io fifidianana io. Loholona enina ambin’ ny folo no nanasonia ny fitoriana naterina etsy Ambohidahy, izay mitondra ny anaran’ny loholona Thierry Raveloson, tany am-boalohany. Nanaraka azy ireo ihany koa ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, talohan’ izao hetsiky ny KMF/Cnoe izao. Ny tsy fahafenoan’ireo mpifidy vaventy handray anjara amin’io fifidianana io no tohan-kevitra nandrafetan’ny telo tonta an’ireo fitoriany. Tsy mitombina amin’ireo antoko politika mpiara-dia amin’ny fitondrana kosa izany fomba fijerin’ireo mpanohitra izany. Valy bontana « Tsy ara-dalàna ny nahalany an’ireo loholona amperinasa, raha io fitakiana lavareny ataon’izy ireo io no dinihina », hoy ny depiote Lanto Rakotomanga, avy amin’ny antoko politika Tanora malaGasy Vonona (TGV), satria natao tao anatin’ny vanim-potoana tsy nahafeno tanteraka an’ireo sokajiana ho mpifidy vaventy ihany koa ny fifidianana azy ireo. Efa ho telo herinandro kosa izao no tonga teny amin’ny HCC ny fitoriana voalohany saingy tsy mbola nisy valiny avokoa ireo fitoriana ireo, hatramin’ny omaly. Nadia tojo fanakianana mafy avy tamin’ireo vondrona parlemantera mpanohitra aza ny HCC, dia tsy niraika tamin’izany mihitsy, hatreto. « Azy ireo izany », hoy hatrany i Jean Eric Rakotoarisoa, filohan’ity andrim-panjakana ity. L’article Fanafoanana fifidianana loholona :: Nitombo telo ny fitoriana voarain’ny HCC est apparu en premier sur AoRaha.
Fizahantany any Vatovavy Fitovinany: manohana 300 miliara ariary ny Fihariana
Mifantoka amin’ny fitaterana sy ny fizahantany ny minisiteran’ny Fitaterana hanomezana aina indray ireo sehatra roa mifamatotra ireo. Maro ny olona mivelona mivantana amin’izany ka mila arenina hainganaTsy afa-misaraka ny fitaterana sy ny fizahantany. Roa volana izao, nifantoka tanteraka amin’ireo sehatra roa mifamatotra ireo ny minisiteran’ny Fitaterana hanomezana aina indray ireo fiharian-karena fototra niharam-pahavoazana toy ny sehatra hafa rehetra tratran’ny krizy ara-pahasalamana. Sarotra arenina izany ankehitriny noho ny fahavoazana isan-tokony mifandray amin’ny fitaterana sy ny fizahantany.Fototry ny toekerem-pirenena ireo, iveloman’ny olona antapitrisany mivantana, ka nametraka paikady vaovao ny minisitera mpiahy ho mpanelanelana sy ho fanarenana izany, any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany. Ho fiatrehana izany ny tetikasa Fihariana sy ny banky Indostrian’i Madagasikara, mifampiraharaha manamora ny fampindramam-bola ho an’ireo sehatra roa roa ireo: fitaterana sy fizahantany. 300 miliara ariary ny hatokana ho amin’izany ary haverina mandritra roa taona, miaraka amin’ny zanabola 8 % isan-taona ho an’ny mpitari-dalana sy ny mpitatitra ahafahan’izy ireo mamelona indray ny sehatra tandrify azy.Maika miaraka amin’izany tetikasa ny fanajariana ny manodidina izany, ny fitandroana ny tontolo iainana. Fandriamapahalemana, fanamboarana fotodrafitrasa manodidina, toy ny lalamby, ny seranam-piaramanidina, tsy ambanin-javatra koa ny fanadiovana ny lakandron’i Pangalana. Manana harena voajanahary mampiavaka samihafa ny manamorona ny lakandrano Pangalana sy ny lalamby FCE ireo rehetra ireo. R.MathieuL’article Fizahantany any Vatovavy Fitovinany: manohana 300 miliara ariary ny Fihariana a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Situation du 27.09.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 27.09.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.Selon le bilan quotidien de la porte parole du CCO, Pr Vololontiana sur la situation du Covid-19 à Madagascar, 28 nouvelles contaminations sur 417 tests effectués ont été enregistrées ces dernières 24h. Ces nouveaux cas sont éparpillés dans la région de Sava avec 15 cas, Vakinankaratra avec 6 cas, Analamanga avec 4 cas, Analanjirofo avec 1 cas, Matsiatra Ambony avec 1 cas et Vatovavy Fitovinany avec 1 cas. Par contre aucune guerison n’a été signalée ces dernières 24h, le nombre de guérisons reste donc à 14 922. Cependant, 1132 personnes suivent encore des traitements dont 17 présentent des formes graves. Le nombre total de décès reste également à 229 puisqu’aucun décès n’a été rapporté. Jusqu’à ce jour, Madagascar compte 16 285 cas confirmés.L’article Covid-19: Situation du 27.09.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Kalon’ny fahiny: nodimandry i Girard
Razedra ihany koa no nahafantaran’ny olona maro azy! Fantatra, omaly, fa nodimandry Razafindrafahatra René Girard, ministre plenipotentiaire, nandalim-pahaizana manokana momba ny arifenitra. Fa ankoatra izay, beso nikoizana tao amin’ny Ataum sy ny Solika ary R’imbosa izy. Anisan’ireo hira nahenoana ny feony ny « Tsy mba misy tsy ho diso”, ny “Vonimboahirana”, ny “Dobla sento”… Santionan’ny hira nasian-dRazedra ny “soniany”. “Poizina!”, hoy i Dadatoa Ar-well sy Rasamy Gitara raha vao nahare ny fidoboky ny beson-dRazedra tao amin’ny Ataum, 50 taona lasa izay, ry zareo », hoy i Mbosa mitantara. Nohamafisiny fa « vitsy tokoa ny manana lokom-peo tahaka ny an’i Girard, mahatakatra feo iva dia iva sady midoboka ». Notohizany tamin’ny: « Razedra, tsy hohadinoina fa voarakitra tsy amin’onjam-peo ihany fa indrindra ao am-po ny feo sy ny hatsaram-panahy ary ny fandalinan’ialahy ny kolontsaina sy ny gadona bagasy ». Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article Kalon’ny fahiny: nodimandry i Girard a été récupéré chez Newsmada.
« Opération coup de poing »: olona 13 tratra tsy nanaja « couvre feu »
Mitohy ny hetsika fampandrian-tany « Opération coup de poing » ao amin’ny faritra Bongolava nataon’ireo polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’i Tsiroanomandidy. Ny 15 sy ny 16 septambra 2020 teo, nisy ny vokatra azo nandritra izany hetsika izany. Olona dimy voasambotra tao Androtra sy tao Mangarivotra noho ny fanaovana trafikana zava-mahadomelina, ny 15 septambra, raha olona roa kosa tratra tao Tsenankisoa, fokontany Tsaralalana, noho ny fisian’ireo roa lahy mpanao trafikana zava-mahadomelina ihany koa niaraka amin’ny ramatoa mpamatsy izany. Olona 13 ny nofotoran’ny polisy noho ny tsy fanajana ny fahazoana mivezivezy amin’ny alina « couvre feu ». Olona 10 voasazy nanao asa miteraka tombontsoa iombonana noho tsy fanaovana arovava, moto miisa 32 nandalo fisavan’ny polisy noho ny tsy fanaovana aroloha. Posy miisa 43 voasava raha 10 amin’ireo kibota 60 nosavaina kosa no niharan’ny sazy avy hatrany. Teo koa ny fisian’ireo olona tratra nitondra fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna niaraka tamin’ny odigasy, raha nikasa hangalatra kisoa.J.C L’article « Opération coup de poing »: olona 13 tratra tsy nanaja « couvre feu » a été récupéré chez Newsmada.